Goobaha Dalxiisyada - Wararka Safarka | Wararka Safarka
Soo hel meelaha dalxiiska ugu soo jiidashada badan adduunka oo sii qorshee fasaxaaga. Adduunku wuxuu ka buuxo yaabab u qalma in la arko, wax badan ha sugin oo qaybtan ka hel meelaha dalxiis ee ugu caansan ee aad naftaada aamusnaan ku weydo inta lagu jiro fasaxyadaada.
Waddankee ayaad jeceshahay inaad booqato? Magaaladee adduunka aad jeceshahay inaad ku lumiso? Halkan waxaad ku leedahay meelaha ugu muhiimsan ee la socdo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, sawirrada ugu fiican iyo dhammaan talooyinka loogu talagalay u safri adduunka oo ka faa'iideyso fasaxyadaada iyo lacagtaada.
by Luis Martinez samee Bilaha 4 .
Waxaan dooneynaa inaan kuugu sheegno maqaalkan meesha lagu safrayo bisha May: tobanka meelood ee ugu wanaagsan. Sababta ayaa ah mid aad u fudud:
by Wararka Safarka samee Bilaha 5 .
Ka faa'iideyso xaqiiqda ah in qabowga si tartiib tartiib ah u sii baxayo heer kulkuna uu sii kululaanayo adigoo booqanaya mid ka mid ah ...
Ma jeceshahay inaad socod aad u weyn ku dhex marto Costa Dorada? Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee joqoraafiga ...
by Maria samee Bilaha 8 .
Cilmiga cilmiga dhulka (Geology) waa mid indho sarcaad ku dheehan tahay kana duwan noocyada ay ku muuqan karto jaleecada hore. Tusaale ka mid ah…
by Mariela Carril samee Bilaha 9 .
Buuro, dhir cagaaran oo cagaaran, bad buluug ah, xeebo iyo qorrax, soo koobid wanaagsan oo ku saabsan waxa ay yihiin Jasiiradaha Marquesas….
Adduunku wuxuu leeyahay jasiirado badan oo qurux badan, Badda Karibiyaana waxay uruurisaa tiro wanaagsan oo janno. Tusaale ahaan, Jasiiradaha ...
Isla Canela, oo ku taal Huelva, waxay ku taal aag mudnaan gaar ah u leh Jasiiradda Iberia. Dhinaceeda woqooyi waxay xuduud la leedahay ...
Stavanger, oo ku taal Norwey
by Mariela Carril samee Sannadka 1 .
Mid ka mid ah goobaha ugu da'da weyn Noorway waa Stavanger. Waa isla waqti magaalo iyo degmo in ...
Hadhaagii boqortooyooyinkii hore ee cadaalad darrada ahaa weli waxaa lagu arki karaa gees ka mid ah adduunka. Tani waa kiiska Jasiiradda ...
Maxaa lagu arkaa Gran Canaria
by Maria samee Sannadka 1 .
Gran Canaria waa jasiiradda leh cufnaanta ugu badan ee dadka Canary Islands, oo qaata malaayiin ...
Maxaa lagu arkaa Vietnam
Fiyatnaam waa mid ka mid ah meelaha ugu dhameystiran ee Koonfur-bari Aasiya maanta. Dal qalaad oo ku yaal Indochina oo ...
Dharka caadiga ah ee ka yimaada Brazil
Waa maxay ugaarsiga dalxiiska?
Shiinaha dhexdiisa cayayaanka ayaa raaxo u ah kalluunka
South America Falls: Waterfalls cajiib ah
Xogta iyo Macluumaadka Aasaasiga ah ee ku saabsan Spain
Dharka caadiga ah ee dumarka reer Mexico
Maxay yihiin dooxooyinka adduunka ugu muhiimsan?
Alpine Fauna: Xayawaanka Switzerland
Xaqiiqooyinka Aasaasiga ah iyo Macluumaadka ku saabsan Yurub
Volcanoes ee Waqooyiga Ameerika
Mantos Paracas: Dhaxalka Dharka ee Dhaqanka Paracas
Masks Folkloric of Peru